चाख्ने होइन, अचार ? Nepalpatra चाख्ने होइन, अचार ?
पसल हेर्दा लाग्छ, त्यहाँ धेरै थोक छैन तर, पृथक वस्तु छ । जुन किन्नका लागि ग्राहकको भीड लाग्छ । अचारका स्वादका लागि यो पसल सबैथोक हो । यसबाट नयाँ तरिकाले काम गरेमा आकर्षक हुन सक्ने देखिन्छ । गाउँघरमै पाइने अनि खासै प्रयोग हुने सामग्रीबाटै बनिएका सामग्री प्रयोग गर्न जान्दाको परिणाम हो, यो । जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा पनि स्थानीय वस्तुलाई प्रवद्र्धन गर्न पसल र उद्योग खोल्ने सफल भइन्छ भन्ने बुझिन्छ । (खोजी समाचार)